Izindaba - Umehluko Phakathi Kwe-Caliper Engaguquki ne-Caliper Ehambayo
Bonke abakhongi abafani. Njengoba onke amaphethini wokugqoka amabhuleki angalingani akufani, futhi namakhambi awafani. Ngaphambi kokuthi uqale ngokulahla abakhongi, kufanele uqale uqonde umehluko phakathi kocingo olungaguquguquki nolintantayo.
Abashayeli abalungisiwe banama-piston amabili noma ngaphezulu aphikisanayo engxenyeni ngayinye ebonisiwe yezindlu ze-caliper. Lezi zindlu zombili ziboshwe ndawonye futhi i-caliper ifakwe ngqo ezindlini ze-knuckle noma ze-axle. Okulandelayo yizinto zokuhlola eziyisihluthulelo eziqondiswe kubashayeli abangahleliwe abangahle babuyele emuva nge-piston. I-Rotor esontekile izodudula ama-piston ohlangothini olulodwa lwe-caliper ibhere yayo. Lokhu kungakhuphula ibanga elizohanjwa yiphedali lapho kufakwa amabhuleki. I-Rotor esontekile nayo ingadala ukushaywa ngamandla ku-pedal pedal.
Amabherethi amasondo angalungisiwe noma ihabhu elinokudlulwa ngokweqile kokuphela futhi / noma ukuphuma kungadala isimo esisezingeni eliphansi lokuhamba ngemuva kokuba imoto ishayelwe isikhathi esithile futhi kufakwa amabhuleki. Lapho imoto iqhutshwa kumgwaqo wokuma nokuhamba, iphedali ingasebenza ngokujwayelekile.
Izinsimbi ezigelezayo zingaba ne-piston eyodwa noma ama-piston amabili atholakala ohlangothini lwe-caliper futhi acindezelwe ku-flange engaphandle ye-caliper. Umzimba we-caliper usekelwa ngamabhawodi ebhuloho avumela ukuthi i-caliper ishibilike kubakaki wayo.
Izimoto eziningi zisebenzisa izikhali ezintantayo. Izimoto ezinkulu nezimoto zomjaho eziqonde ukusebenza zithembele kubashayeli abazinzile ukuze bathole amandla amakhulu amabhuleki.